Hacking လေ့လာဖို့အတွက် Laptop ဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော် ဘာရွေးလေ့ရှိလဲ - Khit Minnyo
Home / Q & A / Hacking လေ့လာဖို့အတွက် Laptop ဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော် ဘာရွေးလေ့ရှိလဲ
Hacking လေ့လာဖို့အတွက် Laptop ဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော် ဘာရွေးလေ့ရှိလဲ
KhitMinnyo June 13, 2022 Q & A
ဒီအကြောင်းက မကြာခဏလည်း မေးလေ့ရှိသလို မမေးသေးပေမဲ့လည်း သိချင်နေတဲ့သူတွေ ရှိနေတဲ့ အကြောင်းပါ။ အရင်တုန်းကတော့ Video တစ်ခုတင်ပေးခဲ့ဖူးပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့လို့ Viber Phishing နည်းလမ်း နဲ့ ဘယ်လိုရှောင်ရမလဲဆိုတဲ့ Mov ကို YouTube မှာ တင်မိလိုက်တဲ့အခါ ... မလိုလားသူအချို့က report လုပ်လိုက်ကြပါတယ်။
အကြောင်းအရာက တိုက်ဆိုင်သွားတဲ့အခါ YouTube Team က Channel ကို ဖျက်ချပစ်လိုက်ပါတယ်။ မဖျက်ခင်မှာ confirm လုပ်ဖို့ အချိန်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲအချိန်တွေတုန်းက ဆန္ဒပြပွဲတွေ ခြိမ့်ခြိမ့်သဲကာလ ဖြစ်နေတဲ့အတွက် ကျွန်တော့်အနေနဲ့ YouTube ကိုရော၊ Mail အဝင်တွေကိုပါ မကြည့်ဖြစ်ပါဘူး။ ဒီတော့ ပျက်သွားပြီးမှပဲ သိလိုက်တယ်ဆိုပါတော့။ အဲကနေစ ပြီး ဗီဒီယိုတွေတင်ဖို့ စိတ်မဝင်စားတော့တာပါ။
ဒါကြောင့်မို့ ဗီဒီယိုတွေတင်ပေးပါဦးဆိုတဲ့သူတွေအတွက် ဒီကနေပဲ တောင်းပန်ပါရစေဗျ။
ဒီ Blog လေးမှာပဲ စာတွေ ပုံတွေနဲ့ Updated အကြောင်းအရာတွေကို တင်ပေးသွားပါမယ်။
ဒီ Blog လေးမှာ မည်သူမဆို လာရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Ads တွေ ပါနေတာကိုတော့ သည်းခံကြည့်ပေးကြဗျ။
ကျွန်တော်က Brand Hater တစ်တယောက်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ မဝယ်သင့်ဘူးလို့ ယူဆတဲ့ Brand အချို့တော့ ရှိပါတယ်။ (ဗီဒီယိုတင်တုန်းကတော့ အဲသည် brand တွေကို ရောင်းသူအချို့က လာတိုက်ခိုက်ဖူးပါတယ်။) ခုလည်း အဲအတိုင်းပဲ ပြောရမှာပါပဲ။ Laptop ဆိုတာ ကိုယ်နဲ့ အချိန်အကြာကြီး အတူရှိနေမယ့် တွဲဖက်ပါ။ မကြိုက်ဘူးဆိုပြီး ခဏခဏ လဲလှယ်နိုင်လောက်အောင် သင့်မှာ ပိုက်ဆံပေါနရင်တော့ စျေးကွက်ထဲက ကောင်းပေ့ဆိုတာတွေကိုသာ ရှာဝယ်လိုက်ပါ။ မမှားနိုင်ပါဘူး။
ကျွန်တော်တို့က Hacking လေ့လာဖို့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဝယ်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက် Kali Linux, Parrot Security OS, Other Linux စသည်ဖြင့် Linux တွေကို သုံးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်တိုင်းပြောရရင် Windows ကို သုံးဖြစ်ချင်မှ သုံးဖြစ်မှာပါ။ ဒီတော့ Windows License ပါပြီးသား Laptop တွေက ကျွန်တော်တို့အတွက် Windows တန်ဖိုးကိုပါ ထည့်ဝယ်ရသလို ဖြစ်နေရင် ပိုက်ဆံအပိုကုန်ပါတယ်။
နောက်တစ်ချက် (ကွန်ပျူတာအရောင်းဆိုင် အချို့မှာ မသိနားမလည်သူတွေ လာဝယ်တဲ့အခါ ဒါက Windows 11 နဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် Latest ဆိုပြီး ဂျင်းထည့်တတ်တာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်) Windows 11 တင်ထားတိုင်း Latest မဟုတ်ပါဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်လောက်က Laptop ကိုလည်းပဲ နည်းနည်းပါးပါး Upgrade လုပ်ပြီး တင်လို့ ရပါတယ်။
ကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့ (Starter တွေ မဝယ်သင့်ဘူးလို့ ထင်တဲ့) Brand တွေ ရှိပါတယ်။
Acer, Hp, Lenovo တွေပါ။ နောက်တစ်ခုက MSI Gaming Series ပါ။ မဝယ်သင့်ပါဘူး။ Kali တင်သုံးမယ်ဆိုရင် Starter တွေအတွက် စိတ်ပျက်စရာတွေ ကြုံရနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ Brand တွေက တော့
Dell, Asus, Fujitsu, Mi, MacBook စတာတွေပါ။
ရွေးသင့်တဲ့ Brand နာမည်တွေ ရပြီဆိုတော့ ထပ်ရွေးသင့်တဲ့အချက်တွေ ပြောပါမယ်။
Intel Chip ပါတာကို ရွေးပါ။ AMD တွေလည်း သုံးလို့ရတာပေမဲ့လို့ Intel ကိုတော့ ပိုကြိုက်ပါတယ်။ i3, i5, i7 စသည်ဖြင့် ကိုယ်သုံးမယ့်ပမာဏနဲ့ အဆင်ပြေတာကို ရွေးပေါ့။
Screensize ရွေးပါ။ ကျွန်တော့်အတွက်ဆိုရင်တော့ ၁၃လက်မ၊ ၁၄လက်မ တွေသည် အဆင်မပြေလှပါဘူး။ မျက်လုံးကို အားစိုက်ရေစပါတယ်။ 15.6 ကနေ အထက် ကို ပိုသဘောကျပါတယ်။ မျက်စိထိခိုက်မှု ပိုသက်သာလို့ပါ။ ပြီးတေ့ အလုပ်လုပ်ရာမှာလည်း ရှင်းလင်းပါတယ်။
RAM က အနိမ့်ဆုံးအဆင့် 4GB ပါရပါမယ်။ (ဒီခေတ်မှာတော့ အဲထက်နိမ့်တာတွေ မရှိတော့ဘူးထင်ပါတယ်) Hacking လေ့လာတဲ့အခါမှာ VirtualBox မှာ Labs တွေတင်ပြီး စမ်းသပ်နိုင်ဖို့လည်း လိုပါတယ်။ ဒီတော့ လေ့ကျင့်တဲ့အခါ 4GB RAM သည် ကောင်းမွန်တဲ့ performance ကို ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် 8GB လောက် ရှိမှ လုံလောက်မှုရှိပါတယ်။ ဒီတော့ ကိုယ့်ကွန်ပျူတာက RAM 4GB ပဲ ရှိတယ်ဆိုရင် 8GB ဖြစ်အောင် ထပ်စိုက်လို့ ရပါတယ်။ အဲလိုထပ်စိုက်တဲ့အခါမှာတော့ RAM Slot က စကားပြောပါတယ်။ RAM Slot တစ်ခုပဲ ပါတဲ့အခါ 8GB ဖြစ်အောင် Upgrade လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် မူလပါတဲ့ 4GB ကို ဖယ်ထုတ်ပြီးမှ 8GB ထပ်စိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ RAM slot ၂ခုသာ ပါခဲ့မယ်ဆိုရင် RAM 4GB နောက်တစ်ကဒ် ထပ်စိုက်လိုက်ရုံနဲ့ RAM 8GB ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကုန်ကျစရိတ် သက်သာတာပေါ့။ ဒီတော့ ဒီအဆင့်မှာ ရွေးချယ်ရမှာက RAM slot ဘယ်နှခုပါလဲ ဆိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လို့ ကိုယ်က ပိုက်ဆံအလုံအလောက်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ RAM 8GB or 16GB ပါပြီးသားကိုသာ ရွေးဝယ်လိုက်တာ ပိုရှင်းပါတယ်။ 😁
SSD ပါတာကို ရွေးဝယ်နိုင်ရင်လည်း ပိုကောင်းပါတယ်။ အကယ်၍ ခု မတတ်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်လည်း ကိစ္စမရှိပါဘူး။ HDD ကို ဖြုတ်ပြီး နောက်မှ SSD တပ်လည်း ရပါတယ်။ ဖြုတ်လိုက်တဲ့ HDD ကို external case လေး တပ်ပြီး external HDD အဖြစ် သုံးလိုက်ရင် Data Backup အတွက်ပါ အသင့်ဖြစ်သွားမှာပါ။
Battery ကလည်း ထည့်စဥ်းစားရမယ့်အထဲမှာ ပါပါတယ်။ ဘက်ထရီအချိန်ကြာကြာအသုံးခံလေလေ ပိုအဆင်ပြေလေလေပါပဲ။ Gaming Series တွေမရွေးသင့်တဲ့အချက်က သယ်ရလေးပြီး ဘက်ထရီကြာကြာမခံတဲ့အတွက်လည်း ပါပါတယ်။
နောက်ဆုံးအချက်ကတော့ ပိုက်ဆံပါ။ ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ ရနိုင်တဲ့ ကွန်ပျူတာတွေကို ကွန်ပျူတာအရောင်းဆိုင်တွေမှာ ကိုယ်တိုင် သွားပြီး ရွေးချယ်ဝယ်ယူတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ကိုယ်တိုင်သွားရွေးဖို့ အခက်အခဲရှိတယ်ဆိုရင်တော့ ယုံကြည်ရတဲ့ ကွန်ပျူတာ အရောင်းဆိုင်ကြီးတွေ Facebook မှာရှိပါတယ်။ အဲသည်ကနေ ဆက်သွယ်စုံစမ်းပြီး ဝယ်ယူနိုင်ကြပါတယ်။ Second တွေထဲက ကောင်းတာတွေကိုလည်း User ချင်း ပြန်ရောင်းတဲ့ Group တွေ ရှိကြပါတယ်။ ရှာဝင် Join ထားပြီး စောင့်ကြည့်နေရင် ကိုယ်နဲ့သင့်တော်မှာတွေထဲက စျေးတန်တာတွေကို တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ဥပမာ - MacBOOk ဝယ်မယ်ဆိုရင် MUM လို Fb group မှာ ပြန်ရောင်းတဲ့ post တွေကို စောင့်ကြည့်နေနိုင်ပါတယ်။ ဝယ်ယူဖို့ တန်တယ် သင့်တယ် ထင်ရင် ကိုယ်တိုင် သွားရောက်စစ်ဆေးပြီး ဝယ်နိုင်တာမို့လို့ Second ဆိုပေမဲ့လည်း အလန်း တွေ ရတတ်ပါတယ်။ ပိုက်ဆံတတ်နိုင်ရင်တော့ အသစ်ဝယ်ပေါ့။ အာရုံမနောက်ရဘူးပေါ့။
ဘာကြောင့် Laptop ရွေးတာလဲ။ Desktop က ပိုမကောင်းဘူးလား
Laptop ကို ကျွန်တော်တို့ ရွေးတာက သူ့ရဲ့ Portable ဖြစ်မှုကြောင့်ရယ်၊ အထဲမှာ WiFi card, Bluetooth ကဒ် ပါ ပါပြီးသားမို့လို့ရယ်ကြောင့်ပါ။ Hacking လုပ်တယ်ဆိုတာ တစ်နေရာတည်းကနေပဲ လုပ်လို့ရတာမျိုးတော့ မဟုတ်နေပါဘူး။ Hacking ဆိုတာ အိမ်တစ်အိမ်ထဲကနေပဲ အမြဲလုပ်လို့ရနေတာမှမဟုတ်တာ။ လိုအပ်တဲ့အခါ အပြင်သွားရတာရှိမယ်။ ပိုပြီး မြင်သာချင်ရင် ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး Hacker Movie လို့ ဆိုနိုင်တဲ့ Mr. Robot ဇာတ်လမ်းတွဲတွေကို ကြည့်ကြည့်ပါ။ မြင်သာလာပါလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ Desktop ကြီးသာ ဝယ်မိလိုက်ရင် ဘယ်လောက်ကောင်းနေနေ ဘယ်ကိုမှ သယ်သွားလို့မှ မရဘဲ။ မကောင်းတဲ့အချက်က Desktop အတွက် ဝယ်လိုက်တဲ့ WiFi adapter သည် WiFi hacking အတွက် အလုပ်ဖြစ် မဖြစ်ဆိုတာလည်း ရှိပါသေးတယ်။ ခုကာလမှာဆို WiFi adapter ကောင်းကောင်းရှာဖို့က မြန်မာပြည်ကလူတွေအတွက် သိပ်မလွယ်လှပါဘူး။ Laptop တွေထဲမှာတော့ WiFi adapter တွေ ပါပြီးသားဖြစ်ပြီး အတော်များများက WiFi Hacking အတွက် သုံးနိုင်တဲ့ Wireless Card တွေ ဖြစ်နေကြပါတယ်။ ပြီးတော့ Laptop ရဲ့ ဘက်ထရီကြောင့်လည်း ဒီလိုမီးမလာတဲ့ကာလတွေမှာ အသုံးဝင်လှပါတယ်။
ပြောသင့်တာတွေ ပြောပြီးပြီဆိုတော့ ကျွန်တော်ဆိုရင် ဘာတွေအကြိုက်ဆုံးလဲ ဆိုတာ လေးနဲ့ နိဂုံးချုပ်ပါမယ်။ အရင်တုန်းကတော့ Mi Notebook Pro တွေကို ကျွန်တော် အရမ်းကြိုက်ပါတယ်။ Price to Performance ဘာညာအရ ကောင်းတယ်မြင်တာကိုး။ ကျွန်တော်က Heavy Use သမားပါ။ တစ်နှစ်လောက်သုံးပြီးတဲ့အခါမှာတော့ CPU fan က တဂျစ်ဂျစ် အသံထွက်လာပါတယ်။ Speaker ၂ခုလုံးကလည်း အသံတွေ စူးရှ အက်ကွဲလာပါတယ်။ ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်းဖြစ်တာလားဆိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အလားတူ ဖြစ်နေသူတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ကျွန်တော့်အသိမိတ်ဆွေတစ်ယောက်ဆို Acer fan ပါ။ သူ့ဆီမှာ Acer ဆယ်လုံးလောက်ရှိပါတယ်။ Keyboard ပျက်တာချည်းပဲ ၆ လုံးလောက်ရှိပါတယ်။ ☺️ သူကတော့ သူတို့အလုပ်သဘောအရ Keyboard ရိုက်တာ ကြမ်းလို့ လို့ ဆိုရှာပါတယ်။ ခုတော့ Laptop ကြီးတွေကို External Keyboard တွေနဲ့ ချိတ်သုံးနေကြလေရဲ့ဗျ။
Laptop ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့နဲ့ အချိန်အကြာကြီးရှိနေမယ့် လက်တွဲဖော်ပါ။ သေချာရွေးချယ်လေလေ နောင်ကို စိတ်အေးရလေလေပါပဲ။ ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး Laptop တွေကိုပြောပါဆိုရင်တော့ Dell XPS developer edition တွေကို အရမ်းကြိုက်ပါတယ်။ MacBook Pro တွေကိုလည်း အရမ်းကြိုက်ပါတယ်။ Asus ထဲက တော်တော်များများလည်း ကြိုက်ပါတယ်။ Dell ထဲကဆိုရင် G5 15 လို Gaming Series လည်း ကြိုက်ပါတယ်။ Alienware တွေကိုလည်း ကြိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကတော့ intel MacBook Pro ပါပဲ။ M1 နဲ့ M2 လို arm arch နဲ့ လာတဲ့ MacBook တွေကိုတော့ မသုံးဖူးလို့ သေချာမပြောနိုင်သေးပါဘူး။ ARM architecture နဲ့မို့လို့ အဆင်မပြေသေးတာတွေ အများကြီး ရှိနေနိုင်ပါသေးတယ်။
ဒီလောက်ဆို ရွေးချယ်ဝယ်ယူဖို့ အဆင်ပြပြီလို့ထင်ပါတယ်။
Thank you for visiting here. 😍
Hacking လေ့လာဖို့အတွက် Laptop ဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော် ဘာရွေးလေ့ရှိလဲ Reviewed by KhitMinnyo on June 13, 2022 Rating: 5